I-TCL TS6110, indlela eshibhile yokwakha itiyetha lasekhaya ngeDolby Audio | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 05/04/2021 10:00 | Kubuyekezwe ku- 27/03/2021 19:57 | General, Izibuyekezo
Lapho kufika imigoqo yemisindo ngamachweba I-HDMI nokuziphendukela kwayo kokubhangqa okuthile namakhono wemisindo ehlakaniphile, manje kunanini ngaphambili abasebenzisi abaningi bakhetha ukufaka amasistimu waseshashalazini lasekhaya ngentengo eshibhile, into eyake, esikhathini "se-analog" kwakuyinto enezindleko ezicishe zingavumi.
Kule ndlu sithanda ukukubonisa zonke izinhlobo zezinye izindlela, futhi kude nemikhiqizo esezingeni eliphakeme kuze kube manje esikukhombise yona emkhakheni weKhaya-Cinema, Sikulethela ukuhlaziywa okujulile kwebha yomsindo wethala lasekhaya le-TCL TS6110, ake sibone ukuthi iziphatha kanjani nokuthi yiziphi izici zayo ezivelele kakhulu.
2 Ukuxhumana nokulungiswa
I-TCL wuphawu olwaziwayo esigabeni semultimedia, yize sike sabona ngisho namadivayisi eselula ethulwa yilo mkhiqizo, iqiniso ukuthi ibilokhu yaziwa njalo ngamathelevishini ayo enenani elihle lemali kanye nemikhiqizo yalo yomsindo, eyokugcina ngokuba yibo namuhla abasilethe lapha. Kulokhu, i-TCL yokulungisa intengo ibe phezulu ayivamisile ukunikela ngomklamo owamukelekayo, futhi yilokho okwenzekile ngaleli yunithi esilihlolile.
Usayizi webha yomsindo: 800 x 62 x 107mm
Usayizi we-Subwoofer: 325 x 200 x 200m
Isisindo sebha: 1,8 Kg
Isisindo se-Subwoofer: 3 Kg
Yenziwe ngokuphelele ngepulasitiki emnyama, enengubo yendwangu ngaphambili, inokubamba okuhle ezansi ukunciphisa ukudlidlizela. Ingxenye engenhla inokuthinta isikhethi se-multimedia, ngenkathi ngemuva kwendwangu iphaneli le-LED lifihliwe yemibala ezokhombisa ivolumu nohlobo loxhumano. Ngemuva kukhona ukuxhumana esizokhuluma ngakho ngokuhamba kwesikhathi. Usayizi futhi uvinjelwe iSub, yize kulokhu kunesisindo esiphakeme ngokubonakalayo kunebha yomsindo namaphayiphu enjoloba ukunciphisa ukuxhumana.
Siqala ngesigaba sokuxhuma, Okokuqala, siqokomisa ukuthi ibha yomsindo ifaka uhlelo lokuxhuma okungenantambo lweBluetooth 4.2, ngaphandle kokukhohlwa iqiniso lokuthi ukuxhumana kwayo okuyinhloko kufanele kudlule ethekwini le-HDMI ngemuva noma, uma wehluleka lokho, okokufaka komsindo okubonakalayo. Kodwa-ke, kwabanodlame kakhulu, kufakwa nechweba le-USB elizosivumela ukuthi sixhume imithombo yomsindo futhi nokuxhumana okudala kepha okungajwayelekile okuyi-3,5-millimeter AUX.
ISub ngokwengxenye yayo inokuxhumeka okuzenzakalelayo ngokuphelele nokungenantambo ngebha yomsindo ngenkinobho eyodwa yokubhanqa okuzoyeka ukukhanya uma lokho kuxhumeka sekusungulwe. Lokho kuzosisindisa ngentambo, hhayi ikhebula lamandla, elizozimela. Ukucushwa kulula kakhulu, ngoba kuzohlala kunika kuqala okufakwayo komsindo ngoxhumano lwe-HDMI, kodwa-ke, kuzohlala kunesidingo ukusebenzisa isilawuli sebha yomsindo kuyo yonke imisebenzi, ngaphandle kokukhuphula nokwehlisa ivolumu yethelevishini, esingayenza ngokulawula okufanayo.
Kumele kuqashelwe ukuthi Kubakaki ababili abafakiwe kuphakheji elizosivumela ukuthi sivumelanise ibha yomsindo ngqo nodonga, kanye nephepha elizosebenza njengohlelo lapho kwenziwa izimbobo ezihambelana nodonga. Okuthile okuphawuleka ngokucabangela uhla lwamanani lapho umkhiqizo utholakala khona.
Sesikushilo konke okungenhla, siqala ukukusho lokho imbobo yokuxhuma ye-HDMI inobuchwepheshe be-ARC, yebo, sihlala ku-HDMI 1.4. Ngokwengxenye yayo, izosivumela ukuthi sisebenzisane nolawulo lwethelevishini ngqo kubha yomsindo, futhi sithumele futhi sithole imininingwane phakathi kwawo womabili amadivayisi, futhi lokho kuyinzuzo edume kabi. Ngokwengxenye yayo, le bha yomsindo ayinakho ukuxhumeka okungenantambo okuphezulu.
Sinefayela le- Umthamo omkhulu we-95db ohambelana namandla awo amakhulu angu-240W. Akukubi kubha yomsindo enesisindo esivinjelwe. Ezingeni lokuhambisana esinalo Ukuboniswa okungu-5.1 okuzonikezwa yiDolby, iqiniso ukuthi ngaphandle kokuthi umsindo uhlukaniswe kakhulu ngaphambili, i-virtualization iyawenza umsebenzi wayo futhi imnandi impela ngaphandle kokubonakala. Noma kunjalo, umyalo uzosivumela ukuthi sishintshe phakathi kokulungiselelwa kokulingana ngakunye ngezikhathi ezithile ezifana ne: ICinema, i-TV nomculo.
Into ebaluleke kakhulu kulolu hlobo lomkhiqizo ihlale iyikhwalithi yomsindo, ikakhulukazi uma sikhuluma ngamanani entengo aphansi, lapho singathola khona cishe noma yini. Iqiniso ukuthi ngaphansi kwama-euro angama-150 le bar yomsindo iyahambisana, ikakhulukazi izengezo. Isinikeza ama-bass avelele futhi azimele sibonga i-subwoofer ezimele, Okuthile umuntu angakulindela kulezi zinhlobo zemikhiqizo, noma kunjalo, kuvame ukufakwa ngoba ama-bass "amboza" ngokunembile nokunye ukukhubazeka kwikhwalithi yomsindo, into umuntu angayilindela.
Umsindo uthambile uma sikhuluma ngethelevishini nomculo, ibanga elinamandla athe xaxa alikho, bese ukhumbula inani bese ukhumbula ukuthi kuncane okungacelwa. Endabeni yokukhiqiza kabusha umculo, uvikeleke kakhulu, kepha uma kukhulunywa ngokudlala ama-movie amanye ama-bass angafihla inkhulumomphendvulwano, futhi lokho kuyinkinga kakhulu ebusuku, uma kunjalo kufanele udlale ngezindlela zokusetha ezihleliwe ngesilawuli kude.
Kafushane Sithola umkhiqizo oyindilinga ucabanga ububanzi bayo bezinga lentengo, uzosivumela ukuthi sijabulele indawo yaseshashalazini yasekhaya ezimeni ezinhle futhi size sizitike ngezinga lomsindo elinamandla amakhulu. Zimbalwa izindlela ezingavela kimi kuleli banga lamanani afaka ukukhweza odongeni, i-subwoofer engenantambo ehlukile, ne-HDMI ARC. ungabheka i-Amazon kusuka kuma-euro angama-150, futhi uqobo Iwebhusayithi ye-TCL.
Kuthunyelwe ku: 5 Apreli 2021
Impela izinto zikanokusho nokuklanywa
Ukulula okubonakalayo kokumiswa
I-subwoofer ezimele ne-Dolby Audio 6 ebonakalayo
Ngandlelathile umsindo oyisicaba
I-Bass ingagudla inkhulumomphendvulwano
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-TCL TS6110, indlela eshibhile yokwakha itiyetha lasekhaya ngeDolby Audio